i-corona igadle kwezwela kubalimi abampisholo - Ilanga News
Home Izindaba i-corona igadle kwezwela kubalimi abampisholo
i-corona igadle kwezwela kubalimi abampisholo
SEKUGADLA nakubalimi abamnyama ukubheduka kwe-co-ronavirus njengoba inhlangano enkulu abahwebelana nayo, seyiphoqeleke ukuhlehlisa zonke
izindali zezinkomo ebezizoba kula masonto amathathu ezayo kulandela isimemezelo sikahulumeni wakuleli, sokumisa yonke into ezweni izinsuku eziwu-21 ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka ngamandla kwe-covid 19.
I-Aadnesgaard And Melouney KwaZulu-Natal (AAMKZN) esingethe izindali zezinkomo ezindaweni ezahlukene maphakathi nesifundazwe, seyinqume ukuhoxisa zonke izindali ebezisekhalendeni layo kuMbasa (April) wonke, ngoba ihlonipha umyalelo kahulumeni wokungahlangani kwabantu abaningi ndawonye.
NgoMsombuluko odlule bekulindeleke ukuba kube nendali yezinkomo, eLions River, ngaseHowick, lapho iningi labafuyi abasafufusa lidayisa khona izinkomo zalo. I-AAMKZN inxuse abafuyi abahweba ngezinkomo ukuhambi-sana nemiyalelo kahulumeni kulezi zinsuku eziwu-21.
UNkk Karen Melouney, onguMqondisi we-AAMKZN, utshele ILANGA ukuthi babone kukuhle ukuba bahambisane nemithetho yezwe ukukhombisa ukubambisana nohulumeni ukulekelela izisulu ze-covid-19, nokuqikelela ukuphepha kwabantu bakuleli.
“Ngenxa yomthamo omkhulu wabantu esiba nawo uma sinendali, bekuzobe sibeka impilo yabantu engozini uma siqhubeka nokwenza indali. Nokho besiyinikiwe imvume yokuba nenani labantu abawu-50.
“Zonke izindali ze-AAMKZN ezingaphezu kweshumi ebesizoba nazo kulezi zinsuku eziwu-21 sezihlehlisiwe. Sizobazisa abafuyi ukuthi sizoqhubeka nini nazo. Siyaxolisa kubona bonke abathintekile ngokuhoxa kwezi-ndali zethu kodwa besibeka impilo yabantu phambili,” kusho uNkk Melouney.
UMphathi-hhovisi wenhlangano yabalimi abaMnyama, i-African Farmers Association of South Africa (AFASA) KwaZulu-Natal, uNkz Nikeziwe Mdhladhla, uzwelane kakhulu nabalimi abasafufusa, abaphila ngokuhweba ezindalini zezinkomo.
Uthe ezolimo zibaluleke kakhulu empilweni yabantu, ngakho uma kukhona okuthikameza abalimi kuzwela kakhulu kokudliwayo.
“Sihweba kalula ezindalini ezinjengalezi, kakufani nokuhweba online. Sivimbeleke nokuphuma ukuyobheka ukuthi ngabe abanye abafuyi sebekulungele yini ukuyofaka izinkomo zabo endalini. Besicela abafuyi baqine idolo, zonke izimo zifika zedlule ngakho naso lesi esibhekene naso sizodlula,” kusho uNkz Mdhladhla.
Okhulumela uMnyango zoLimo, amaHlathi NokuDoba kuzwelonke, uMnu Reggie Ngcobo, ubonge izinhlangano zezindali ezingaphoqelelanga ukwenza izindali naphezu kokuba ikhona imigomo ezazinikwe yona yokwenza izindali.
“Sasinqume ukuthi uma kwenziwa izindali abantu mabangeqi kwabawu-50 ngoba senzela ukuthi inyama ingapheli ezilaheni. Siyabonga uma kukhona ababonile ukuthi ngeke bakwazi ukumelana nomthamo wabantu base behlehlisa izindali.
“Lokho kusho ukubambisana okuhle kubahwebi nohulumeni ukubeka impilo yabantu phambili kunenzuzo. Sifisa sengathi nabanye bangabonela kulokhu,” kusho uMnu Ngcobo.
Previous articleizinsolo zokudlwengulwa kotholwe elenga esefile
Next articleubhubhane lunyakazise izimeya zamadolobha amancane